2021 नयाँ ऊर्जा वाहन हेज दर सूची जारी गरियो - Pandaily
जन 10, 2022, 20:00अपराह्न 2022/01/10 23:17:31 Pandaily
जनवरी 6, चीन ओटो डीलर चैंबर (सीएडीसी) र कार घाटी संयुक्त रूपमा जारी “2021 चीन मोटर वाहन हेज रिपोर्ट.
चीनको स्वतन्त्र उद्योग संघ द्वारा बजार डेटा ट्रयाक गर्न र कार घाटी अनुमानित दोस्रो-हात कार डेटा विश्लेषणको ट्र्याक गर्न चीनको स्वतन्त्र बजार हेजिङ निर्देशहरू। रिपोर्ट स्वत: समय उमेर संग हेज को ट्रैक गर्दछ, जसमा स्वतंत्र, संयुक्त उपक्रम र आयोतित मोडेल शामिल छ।
नयाँ ऊर्जा वाहन हेज दर सूचीमा ब्रेकडाउन, Wuling Hongguang MINIEV लाई 8 9. 8% हेडिंग दर पहिलो स्थानमा छ। जिओ पेंग P7 ले हिरोइनको 85.67% सम्ममा दोस्रो स्थान पाएको छ, विश्वको सबैभन्दा बिक्रि टेस्ला मोडेल3ले हेडिंग3देखि 84.67% तेस्रो स्थान पाएको छ। अर्को टेस्ला मोडेल Y टाइप5औं स्थानमा छ।
BYD को लगभग 79.36% को मूल्य को बचाता छ, सूची मा छठे, गुआंगज़ौ ओटोमोबाइल एयन वी, एनआईओई ES6, गुआंगजौ ओटोमोबाइल एयन एस र BYD तांग को सातवें देखि दसवें स्थान मा छ।
अर्को हेर्नुहोस्:टोयोटा र BYD पहिलो शुद्ध इलेक्ट्रिक कार पहिलो बनाउन, ब्लेड ब्याट्रीसँग सुसज्जित छ
निर्माता, जापानी कार ब्रान्ड हेज अझै पनि 71.91% हो, पहिलो स्थानमा। जर्मन विभाग, कोरियाली कार दुई वा तीन विभाजित, हेजिङ दर 60% भन्दा बढी छन्। 2020 को तुलनामा, चीनको स्वत: ब्रान्ड मूल्य वृद्धिले 2020 बाट सातौं स्थानमा यो रिपोर्टको चौथो स्थानमा छ।